Ukuphupha iMars Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
IMars yenye yezona zithixo zibalulekileyo kwiRoma yamandulo. Waziwa njengothixo wemfazwe okanye uthixo wemfazwe kwaye ke ulinganiswa nothixo wamaGrike u-Ares. Nangona kunjalo, iMars yathandwa kakhulu kunogxa wayo wamaGrike, ngenxa yoko yaphumelela kunqulo. UMars ukwathathwa njengoyena thixo ubalulekileyo waseRoma kunye noJupiter. Isinqandi somthi sanikwa iMars njengentaka ekhuselayo.
Iplanethi kaMars ifumene igama layo kulo thixo. Kubalwa ukusuka ilanga, yiplanethi yesine kwinkqubo yelanga kwaye, ke, ummelwane wangaphandle womhlaba. IMars ikwayenye yeeplanethi ezinje ngomhlaba, uphando oluninzi luyenziwa namhlanje malunga nokuba bukhona na ubomi apho.
IMars ikwabizwa ngokuba "yiplanethi ebomvu" ngenxa yomhlaba wayo onomhlwa, okhazimla obomvu-orenji. Ke ngoko, kunokucetyiswa ukuba ukutolikwa kwamaphupha ixesha elide kuthathele ingqalelo ukutolikwa kweempawu zamaphupha "obomvu" kunye "nemibala".
1 Uphawu lwephupha «iMars» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iMars» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iMars» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iMars» - ukutolikwa ngokubanzi
Uhlalutyo ngokubanzi lwamaphupha lutolika uphawu «uMars», xa lubonakala njengothixo wemfazwe ephupheni, njengophawu lwe impumelelo. Umphuphi uya kuba nesibindi sokuzibonakalisa el mundo vuka ujongane nobunzima obuvelayo.
Nabani na odibana nothixo wemfazwe ephupheni lakhe naye unoxanduva Isiqalo esitsha kwakamsinya okanye kunokwenzeka kufanele ukuba abuhlele ngokutsha ubomi bakhe. Ukuba umntu ophuphayo nguthixo wamaGrike u-Ares ngokwakhe ephupheni, kufuneka azi ukuba uyathandwa kwaye uhlonitshwe ngabanye.
Ukuba umfanekiso wephupha "uMars" ubonakala njengeplanethi ebomvu ephupheni, umphuphi amaxesha angonwabanga ngaphambili. Ngenxa yokuba abahlobo bakhe baya kuziphatha ngokukhohlakeleyo kuye, iintshaba zakhe ziceba amayelenqe kwaye zifuna ukumonakalisa. Ukongeza, iMars inokufuzisela unxano olunenzuzo lwesenzo ngexesha lokulala. Umbono weglobhu ye-Mars ephupheni ihlala ikhomba kumathuba amatsha.
Ukuba umntu oleleyo utsala iplanethi iMars ephupheni lakhe, uya kuba ngabahlobo bakhe ngenxa yokuqonda kwakhe ulwazi. ukuyiswa. Iya kuba phambili kwicandelo lezemali. Nabani na obona abantu abahlala eMars ephupheni lakhe uya kuba nesibindi kwaye ajongane nemisebenzi yakhe ebomini bokuvuka. Nangona kunjalo, unokuthabatheka bubundlobongela.
Ukuba umphuphi uhamba aye eMars nerokethi ephupheni lakhe, uhlala eyilangazelela kwihlabathi elivukayo. Utshintsho okanye amava amatsha ahamba ngaphaya kwemida yobomi bakho bangoku.
Uphawu lwephupha «iMars» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwenqanaba lengqondo lokuchazwa kwephupha, uMars ubonwa ephupheni njengembonakalo yokuqina, ukuzimisela kunye nobunzima. Kwakhona kunokubakho amandla Cingisisa ngezinto onokuzidala uzitshabalalise. Ngale nto, ukulala kufuneka kuphathwe ngokufanelekileyo kwihlabathi lokuvuka.
Isimboli kaMars inokubonwa njengothixo ephupheni. Indawo yoBuntu babonisa ngubani onoxanduva lokwanelisa iimfuno zabo kunye neminqweno yabo.
Kwiphupha lomfazi, uthixo uMars angabonisa ngesibindi kunye nokuzimisela kweempawu zomntu. Ukuba indoda iphupha ngobu thixo, iye yafikelela kubudoda bayo.
Ukuba uphupha ukubhabha kwiplanethi ye-Mars njenge-astronaut, uhlala ufuna ukuyeka imisebenzi kunye noxanduva lwemihla ngemihla. Kwangelo xesha, le meko yamaphupha inokukhokelela ngakumbi inkalipho cela ukufumana nokunyanzelisa indlela yakho ebomini.
Uphawu lwephupha «iMars» - ukutolika kokomoya
Ukubonwa kwinqanaba elingaphaya kwengqondo, iphupha apho uthixo uMars uvela khona ungabonisa ukuqonda kwamandla amakhulu. Umphuphi uye waqonda kwihlabathi lokuvuka ukuba yonke into ebomini ixhomekeke kwinto ethile amandla Ukuhamba kungena.
Ijongwa njengomzimba obandayo wasezulwini ephupheni, uphawu lwephupha "uMars" lunokubonisa amandla awodwa anokuthi umntu afunde ukujongana nawo.